DHEGEYSO-Taliska Dhowrista deegaanka degmada Qardho oo hadlay. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Taliska Dhowrista deegaanka degmada Qardho oo hadlay.
Luulyo 26, 2016 3:15 b 0
Qardho, July 26 2016–Taliyaha ilaaleda degaanka dowlada hoose degmada Qardho Cabdirisaaq Xuseen Kowte, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dedaalka lagu dhowrayo deegaanka.
Waraysi-Afhayeenka wasaaradda amniga oo aan ka waraysanay qaraxyo laga maqlay Muqdisho.
Ciidanka Danab ee XDS oo khasaare ballaaran u geystay maliishiyada Al Shabaab.